မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် LED ဗီဒီယိုနံရံထုတ်လုပ်ခြင်း. - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
အတွင်းပိုင်းအပြင်ဘက်တွင်ထုတ်လုပ်မှု P1.25 P1.5 P1.8 P1.9 P2 P2.5 P2.9 P3 P3.91 P4 P4.81 P5 P6 P8 P10 ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုသိလိုပါ?
. LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်နည်းပညာ:
1) သန့်ရှင်းရေး: ultrasonic သန့်ရှင်းရေး PCB သို့မဟုတ် LED bracket ကရွေးချယ်ပါ, နှင့်ခြောက်သွေ့.
2) LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် mounting: ငွေအကော်ပြီးနောက် LED သေ၏အောက်ခြေလျှပ်ကူးပစ္စည်းအပေါ်ကိုပြင်ဆင်သည် (နံရံကြီး), အဆိုပါတိုးချဲ့ပြွန် core ကို (နံရံကြီး) ဗိုင်းလိပ်တံစားပွဲပေါ်တွင် installed ဖြစ်ပါတယ်. ဏုအောက်မှာ, အဆိုပါသေ PCB သို့မဟုတ် LED bracket က၏သက်ဆိုင်ရာ pads အပေါ်တ ဦး တည်းအားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်, ပြီးတော့ငွေ glue.3 ခိုင်မာစေရန် sintered) အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ဖိအားဂဟေ LED: အလူမီနီယံဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ရွှေဝါယာကြိုးဂဟေဆော်စက်ကိုလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို LED tube core နှင့်လက်ရှိအရေးအသားအတွက်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်. PCB တွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်သည်, များသောအားဖြင့်လူမီနီယံဝါယာကြိုးဂဟေဆော်စက်ကိုရွေးချယ်ပါ. (ထိပ်တန်း ဦး ဆောင်သောအဖြူရောင်လိုအပ်သောရွှေဝါယာကြိုးကိုထုတ်လုပ်သည်)
4) LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်အထုပ်: ထုတ်ပေးပြီးနောက်, LED သေပြီးဂဟေဝါယာကြိုးကို epoxy resin ဖြင့်ထိန်းသိမ်းသည်. PCB ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်ပေး၌တည်၏, ကုသပြီးနောက်ဂျယ်လ်ပုံသဏ္forာန်အတွက်တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိပါသည်, သော backlight ထုတ်ကုန်များ၏တောက်ပမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်. ဤဖြစ်စဉ်သည်ဖော့စဖရပ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုလည်းဆောင်ရွက်လိမ့်မည် (အဖြူရောင် LED).
5) LED ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင် ဂဟေ: အဆိုပါနောက်ခံ smd-led သို့မဟုတ်အခြားထုပ်ပိုး ဦး ဆောင်လျှင်, နည်းပညာကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ဦး ဆောင်သော PCB ကိုဂဟေဆော်ရန်လိုအပ်သည်.
6 LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ဖြတ်တောက်ခြင်းရုပ်ရှင်: အမျိုးမျိုးသောပျံ့နှံ့ရုပ်ရှင်လိုအပ်သောလာကြတယ်သေဖြတ်တောက်ခြင်းနောက်ခံအလင်းကိုသုံးနိုင်သည်, ရောင်ပြန်ရုပ်ရှင်, စသည်တို့.
7) LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်း: အဆိုပါပုံဆွဲတောင်းဆိုမှုကိုအရသိရသည်, အဆိုပါ backlight ကိုအရင်းအမြစ်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများနှင့်နည်းစနစ်များမှန်ကန်သောအနေအထားတွင် install လုပ်ထားရပါမည်.
8) အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်စမ်းသပ် LED: နောက်ခံအလင်းနှင့်အလင်းတစ်ပုံစံတည်း၏ photoelectric parameters တွေကိုထူးချွန်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ.
9 LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ထုပ်ပိုး: ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းထုတ်ကုန်များတောင်းဆိုချက်အရ.